17 May 2013 - Twi online
Friday Sermon: Building of Mosques - An Ahmadiyya Priority - 17th April 2013 - Ashanti Twi Translation.
ƐFIADA NYAMESƐM: Kͻtͻnimaa Bosome da a ɛtͻ so 17, wͻ afe 2013
(Summary of Friday sermon 17th May 2013 – Ashanti Twi Translation)
NSƆREDAN SIE: AHMADIYYA BOTAEƐ.
Hadhrat Khalifatul Masih kenkan tashhud, tawwuz ne Sura Al-Fatiha wie no, ͻkenkan kyɛfa Sura Al Tauba (Ch 9:18) wͻ Kur’aan Kronkron no mu.
Ampa ara sɛ, Ɔno nkoaa na Ɔfata sɛ Ɔyɛ Allah Asͻre Fie kronkron no nsiesieɛ no so hwɛsofoͻ. Obi a ͻgye Allah die, ɛne ɛda a edi akyire ne na ͻyͻ Asͻre no na ͻtua Zakat no, na ͻnnsuro obiara ka Allah ho; enfi weinom saa na wͻsɛ sɛ wͻbɛka wͻn aka wͻnom a wͻanya kwankyerɛ no ho.
Ɛnɛ da yi, Nyame adom nti Nyankopͻn adom Ahmadiyya Muslim Jama’at a ɛwͻ British Columbia no Asͻredan. Ahmadiyya abusua kuo no bi atena ha mfie aduanan (40 years) kͻsi aduonum (50years). Ebinom nso atena ha bɛyɛ mfie aduonu num (25 years) anaa aduosa (30 years) nanso afei na wͻatumi asi Asͻredan wͻ ha. Na kwan da hͻ wͻ dan no mu, na wͻhyia yɛ asͻre na wͻsan yͻ nhyiamu, ɛno nti na ebia mo anyɛ ahoboa sɛ mobɛsi asͻredan. Ebi nso wͻ hͻ a, hia a ehia sɛ yɛhyia mu na yɛbɛtumi atete yɛn nkurͻfoͻ,na deɛ ɛteɛ biara no, asͻredan wͻ ne mfasoͻ ne ne ahiadeɛ. Asͻredan “minaret” ne “dome” no, ne asͻredan no tebea ne ɛho nsiesie no hyɛ Jama’atfoͻ no animonyam san ma afoforͻ no ne ͻman no din pa. Baabi a yɛsi asͻredan no, yɛnya baeɛ foforͻ a yɛde Islamsom no ba hͻ ma afoforͻ hunu, afei akwanya foforͻ ba ma yɛbͻ Islam ho dawuro kͻ nkuro akɛseɛ mu.
Wei nti na Bͻhyɛ Mɛsia (ANN) atwe y’adwene asi so sɛ, yɛbɛsisi nsͻredan na ͻsan ka sɛ ɛkwan wei so na yɛbɛtumi aka Jama’at no abͻmu na atumpͻn, afei nso adwuma a yɛyɛ de ka Islam nsɛmpa no nso bɛtu mpͻn. Ɛyɛ nokorɛ, w’aka sɛ, ɛmfa ho sɛ asͻredan no yɛ kokorowa, ɛho hia sɛ yɛsi asͻredan. Nkurͻfoͻ kuo bi bɛdwene sɛ, afei deɛn na ɛho hia sɛ yɛbɛsi nsͻredan akɛseɛ sei, ne titire, nkra firi Jama’at ahodoͻ no hͻ ba sɛ wͻpɛ sɛ wͻsi asͻredan. Afei nso, ebinom ahoͻden nso sɛ wͻbɛsi asͻredan no na ɛwͻ sɛ Ekuo ne tiri (National Headquaters) na ɛboa wͻn. Enti, adwene no ba sɛ, sɛ yɛsi nsͻredan ketewa, ɛneɛ yɛbɛtumi de sika korͻ no asi nsͻredan pii. Sɛ yɛdwene nhyehyɛeɛ pa ho a, ɛneɛ yɛremmisa saa nsɛm yi, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a saa nhyehyɛeɛ yi bɛda adi wͻ Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) nkasaeɛ mu: “Inna mal a’maalo bin-niy-yaat” a ɛkyerɛ sɛ yɛn neyɛeɛ no ho akyɛdeɛ no gyina tirimupͻ a yɛde bɛyɛ saa adeɛ no.
Vancouver yɛ kuropͻn kɛseɛ wͻ British Columbia na ɛsan yɛ beaɛ bi a Ahmadiyyafoͻ dodoͻ a wͻwͻ British Columbia tena na yɛhwɛ Ahmadiyyafoͻ dodoͻ a wͻte British Columbia hͻ no a, asͻredan no nyɛ kɛseɛ. Afei sɛ yɛhwɛ Nyankopͻn adom, Ne Kɛseyͻ, N’akwan a Ahmadiyya nkorabata a wͻbͻ Ahmadiyya nsɛmpa no ho dawuro no si fa so bue a, wͻhwehwɛ firi yɛn nso hͻ sɛ yɛbɛtrɛ yɛn nkorabata mu. Ɛneɛ, ɛwͻ sɛ yɛn beaɛ mu trɛ egyina fapem a Nyankopͻn yi kyerɛɛ Bͻhyɛ Mɛsia (ANN) ne sɛ “was-say a makanaka,” wͻ berɛ a Nyankopͻn kyerɛɛ no sɛ ͻntrɛ ne fie na ͻma dabrɛ kɛseɛ mra hͻ. Saa yikyerɛ yi kyerɛ sɛ yɛntrɛ yɛn fie na yɛn ma dabrɛ kɛseɛ mra hͻ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi agye ahͻhoͻ pii wͻ mu wͻ berɛ a wͻbɛsra yɛn anaa wͻ ba Jalsa nkoaa na mmom yɛ pɛ sɛ yɛn nsͻredan nyinaa bɛyɛ kɛseɛ na emu asan atrɛ.
Afei saa berɛ a yɛwͻ mu no, Nyankopͻn afrɛ bͻhyɛ Mɛsia(ANN) no sɛ “Ibraheem” na ɛnam Hadhrat Ibraheem (ANN) so na Nyankopͻn asi Khana Ka’aba no. Sɛ yɛbɛhunu Nyankopͻn Koryͻ no, Nyankopͻn fie a yɛsii no kane sɛ yɛde bɛsom Nyankopͻn no, Hadhrat Ibraheem (ANN) na ͻsii no foforͻ na ͻsan sieisie no yie. Afei Nyankopͻn bͻhyɛ no, ɛnam Bͻhyɛ Mɛsia (ANN) so na awiase bɛhunu, na wͻrehunu nso na akyineɛ biara nni ho sɛ Islam nkunimdie bɛba a ɛnam Bͻhyɛ Mɛsia (ANN) so. Na sunsum afa mu no, saa berɛ yi mu no, botaeɛ a ɛwͻ Khana Ka’aba no sie no ho no bɛba mu a ɛnam Bͻhyɛ Mɛsia (ANN) so na ewiase nyinaa bɛte ho nsɛm na w’asan ahunu bi. Botaeɛ a yɛde si nsͻredan ne sɛ nipa bɛhyia mu na w’asom Nyame Baako no. Yɛhwɛ ɛfa wei a ɛwͻ sɛ yɛma y’ani kͻ nsͻredan sie so.
Sɛdeɛ mekaeɛ no, asɛm pͻtee ne sɛ, Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) nkyerɛkyerɛ no yɛ, sɛdeɛ yɛn neyͻeɛ ne yɛn anamͻntuo teɛ na yɛn tirimupͻ ne sɛ yɛbɛyɛ adwuma na y’ada Nyankopͻn Baakoyͻ no adi na y’aka Ne nsɛmpa no na yɛaboaboa dͻm ano de wͻn abɛhyɛ Nyankopͻn Naako no frankaa no ase na yɛde nsakraeɛ a ɛde mpuntuo bɛba y’asetena mu ne y’asefoͻ na yɛreyɛ wei no, yɛama honamdua ne yɛn mma abrɛ wͻn ho ase wͻ Nyankopͻn anim. Ɛwͻ sɛ yɛyɛ deɛ yɛbͻtumi biara na yɛtu “Salat” ho anamͻn na yɛahyɛ asͻredan no mu ma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛka sɛ asͻredan no mu sua.
Sɛ wei yɛ yɛn tirimupͻ a, endeɛ yɛrensi nsͻredan akɛseɛ no mmfa nnkyerɛ nko na mmom ɛbɛyɛ akɛseɛ wͻ berɛ a ɛbɛma Nyankopͻn ani agye ho. Na Nyankopͻn yɛ adom a, megyidi yie sɛ mo a mote mpͻtamu ha no, mo na mobɛhyɛ asͻredan yi mu ma. Sɛ moyͻ mo asɛdeɛ pɛpɛɛpɛ a, ɛndeɛ sɛ moka Islam Ahmadiyyat ho nsɛmpa no a, mobɛdi nkunim na mobɛtu mpͻn wͻ mo sunsum mu. Ɛna sɛ moka mo mma kͻ Nyankopͻn Baako no ho a, mobɛhunu nsakraeɛ wͻ asaase yi so ha ne mo wuo akyi. Nyankopͻn ani bɛgye won so ho na Ɔde Ne nhyira ne N’adom agu wo so. Na sɛ Nyankopͻn hyɛ aseɛ de N’adom gu nkurͻfoͻ so, na botaeɛ ne sɛ N’ani bɛgye wo ho. Ɛneɛ, aman biara so no Nyankopͻn dom nkurͻfoͻ a wͻboa ma wͻsi asͻredan pii.
Afei, ɛwͻ sɛ mo tirimupͻ yɛ sɛ yɛrentwɛn mfie aduosa (30 years) anaa aduonan (40 years) ansana y’asi asͻredan foforͻ na mmom ɛwͻ sɛ yɛtoa so yͻ wei aberɛ biara, nsͻredan a yɛbɛsie no ɛbɛyɛ ketewa a ɛrentumi mfa nkurͻfoͻ pii. Sɛ yɛrehyɛ asͻredan mu ma, na yɛreyɛ y’asɛdeɛ sɛ yɛbɛsom Nyankopͻn, na y’agyina Ne nkyerɛkyerɛ so na y’adi Ne nkyerɛkyerɛ so ama y’abrabͻ awie pɛyͻ a, yɛbɛpagya y’ahiadeɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtrɛ yɛn nsͻredan mu. Ɛkwan a yɛbɛtumi ada yɛn ho so na y’anya Nyankopͻn hͻ nhyira na y’anya ɛho mfasoͻ dabiara wͻ mberɛ pii na Nyankopͻn nso de N’adom no adom yɛn da biara.
Enti sɛ yɛde tirimupͻ wei de rebue saa asͻredan yi ano a, ɛneɛ na yɛreyɛ krado sɛ yɛrensi saa asͻredan yi mmerɛ tentene yi. Ɛna beaɛ a yɛrensi asͻredan no, ɛhͻ nso yɛrebue asͻredan yi ano no, wͻbɛtwe wͻn adwene aba saa dwumadie a mfasoͻ wͻ so sei na wei nso bɛboa mo ama mo ayɛ ahoboa wͻ mmerɛ tentene a mo atumi de asi saa asͻredan yi. Da biara mo nkae sɛdeɛ m’aka no dada no, sɛ asͻredan wͻ ne mfasoͻ, na ne mfasoͻ ne baabi a ɛwͻ ne, ne asͻfoͻ tenabea (Mission house) anaa adan akɛseɛ a ɛwͻ mu no rentumi nduru mpɛnpɛnsoͻ a asͻredan wͻ no.
Ampa, ɛyɛ nokware sɛ adan akɛseɛ no boa ma Jama’at no nya baabi a wͻka wͻn ho bͻ mu na nso sunsum mu nkutahodie a y’anya no sɛ ɛyɛ asͻredan mu anaasɛ suban anaa neyͻeɛ a ɛwͻ sɛ yɛyͻ wͻ asͻredan mu. Ɛrentumi nsi wͻ berɛ a asͻredan papa nni hͻ. Wei nso ka onipa suban ho sɛ wͻnim a. Enti baabi a mo atͻ asaase biara no, monsi asͻredan papa ɛsan sɛ mobɛsi asa ne apue (Hall and centres) no. Me nyaa nkra firii Canada man no mu sɛ, Jama’at no bi anya asaase na wͻn pɛ sɛ wͻde wͻn sika no si dan kɛseɛ nkoa nanso meda Nyame ase sɛ, w’asesa w’adwene ne wͻn nhyehyɛeɛ no wͻ berɛ a me ka kyerɛɛ wͻn sɛ wͻnhwehwɛ asɛm no mu yie. Nyankopͻn mmoa beaɛ a wͻpɛ sɛ wͻsi asͻredan no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wͻbɛtumi asie.
Ɛyɛ nokorɛ sɛ, sɛ yɛsi asͻredan foforͻ a na y’abue nkorabata a yɛde bɛka Islam Ahmadiyya ho nsɛm. Bosome miɛnsa ewieɛ no, me kͻ bue asͻredan ano wͻ Valencia wͻ Spain man no mu, na nkra a me nsa aka ne sɛ, wͻn a wͻnnyɛ Muslimfoͻ no rebisa Islam ho nsɛm ɛna wͻn a wͻnnyɛ Ahmadiyyafoͻ no nso bɛyɛ asͻre wͻ asͻredan wei mu na ɛnam wei so nti wͻrenya nteteɛ fa Jama’at no nimdie ho. Ɛyɛ Nyame pɛ a (Insha Allahu), saa nkurͻfoͻ kuo no mu wͻn a wͻyɛ ahoteefoͻ no, Nyame de nsakra pa bɛwura wͻn akoma mu na wͻbɛgye Islam Ahmadiyya adi na w’abɛka yɛn ho. Asɛdeɛ a Nyankopͻn de domm Bͻhyɛ Mɛsia (ANN) no, baako ne sɛ, ͻbɛkyerɛkyerɛ Muslimfoͻ Islam nkyerɛkyerɛpa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wͻbɛboa wͻn ano wͻ Islam a Ɔkͻmhyɛni Kronkron Muhammad (NNN) de aba no na w’adi mmra (Shariah) a Nyankopͻn yi maa no so.
Nyankopͻn akyerɛ Bͻhyɛ Mɛsia (ANN) no wͻ nyikyerɛ mu sɛ “boaboa Muslimfoͻ a ɛwͻ asaase so nyinaa ano bra nokorɛ som no mu”. Ɔrekyerɛ aseɛ no, Bͻhyɛ Mɛsia (ANN) no aka sɛ, saa asodie a yɛde ama me sɛ me mboa Muslimfoͻ nyinaa ano wͻ asaase so no yɛ nkyerɛkyerɛ soronko. Afei ͻrema Hadhrat Ibraheem (ANN) nhwɛsoͻ no, Bͻhyɛ Mɛsia (ANN) no aka sɛ Nyankopͻn hyɛɛ ogya no ma no dwoeɛ a na ɛyɛ ahobanbͻ ma no a ɛbaa mu pɛpɛɛpɛ. Nyankopͻn pɛ sɛ Muslimfoͻ a ɛwͻ asaase yi so nyinaa ka wͻn ho bͻ mu wͻ som korͻ mu na wei nso bɛba mu na wͻn nso bɛka wͻn ho abͻ mu ayɛ baako. Na wei nso nkyerɛ sɛ nsonsoeɛ remma wͻn mu. Nsonsoeɛ deɛ ebi bɛba wͻ wͻn mu nanso wͻrenyɛ sɛ yɛbɛhunu wͻn sɛ wͻyɛ ahomasoͻ anaa wͻsene obi.
Afei ɛkwan a Muslimfoͻ ne wͻn a wͻnnyɛ Muslimfoͻ no de bɛnya akwankyerɛ no nam Bͻhyɛ Mɛsia (ANN) no nkoaa so. Ɔman wei ne kuropͻn wei mu no, Muslimfoͻ mpempem ne akyire na wͻte ha ɛnti saa asͻredan yi bɛyi wͻn asotire na afei nso asͻredan yi a yɛsi no bɛma wͻn a wͻyɛ Muslimfoͻ ne wͻn a wͻnnyɛ Muslimfoͻ no bɛka nsɛmpa ne nsɛmbͻne na wei bɛboa ama y’aka Islam Ahmadiyya ho nsɛmpa no. Enti ɛwͻ sɛ mo boa mo ho twɛn wei. Enti asͻredan yi a yɛsi no bɛma mo asɛdeɛ akͻ nkan. Ɛda adi pefee sɛ, sɛ wo boa wo ho sɛ wobɛka Islam Ahmadiyya nsɛmpa no a, ɛwͻ sɛ wo sesa wo suban na wo ma wo nimdeɛ kͻ nkan wͻ gyidie nsɛm mu. Wei nso ho hia papaapa, sɛ woanyɛ wei a ɛnam wo kasa ne wo suban a ɛndi mu a, obiara mpɛ sɛ ͻbɛbɛn wo.
Enti asͻredan sie bue kwan ma onipa nya Nyankopͻn nhyira a ɛboa ma ogyidini biara gyidie kͻ nkan dabiara. Ɛyɛ nhyira ma Jama’at no nyinaa wͻ berɛ a yayɛ y’adwene sɛ yɛbɛsi nsͻredan wͻ mpɛnpɛnsoͻ bi a y’akͻ duru. Nyankopͻn akyerɛkyerɛ nsͻredan ho mfasoͻ wͻ Kur’aan kyɛfa pii mu. Kur’aan no ka obuo a ɛwͻ sɛ yɛde ma nsͻredan. Na ɛsan kasa fa hia a ɛhia sɛ yɛsi asͻredan na ɛsan nso de nhyehyɛeɛ agu akwan mu ma wͻn a wͻhyɛ Nyame asͻrefie hͻ ma. Seesiara, kyɛfa a m’akenkan no wͻ Kur’aan yi mu no kyerɛ wͻn a wͻhyɛ asͻredan mu ma.
Deɛ adi kan ne wͻn a wͻhyɛ asͻredan mu ma ne wͻn a wͻba asͻre no yɛ wͻn a wͻgye Nyame die. Nanso sɛ yɛka sɛ yɛgye Nyame di a ɛnso hͻ ara. Gyidie a m’aka no wͻ ha no wͻ nkyerɛmu a Nyankopͻn aka ho asɛm. Nyankopͻn Kokroko no aka sɛ, sɛ wobɛnya saa gyidie gyinabrɛ yi a, ɛnneɛ yɛbɛkan wo aka wͻn a wͻn gyidie wie pɛyͻ no ho, nyɛ saa a wogyidie no renwie pɛyͻ. Nhwɛsoͻ ne sɛ, Nyankopͻn Kokroko no aka no wͻ Kur’aan kyɛfa (49:15) mu sɛ: “qaalatil a’raabo aamanna” n’asekyerɛ ne sɛ, Arabfoͻ a wͻwͻ asaase kɛseɛ no so se, “yɛgyedi” nanso Nyankopͻn se “Qul lam to’minoo wa lakin qoolo aslamna”, n’asekyerɛ ne sɛ, Mo nya ngye ndiiɛ, na mmom monka sɛ, y’agye Islam ato mu.
Enti Nyankopɔn ka kyerɛɛ Ɔkɔmhyɛni (NNN) sɛ, ɔnka nkyerɛ wɔn sɛ, mma wɔn nka sɛ w’agye adi na mmom wɔn nka sɛ w’abɛyɛ yɛn asotiefoɔ, na wei bɛyɛ nyinasoɔ pii, enti sɛ yɛreka “Kalima” na afei yɛretu mpɔn wɔ yɛn gyidie mu, na yɛn ne Nyankopɔn anya nkutahodie pa na yɛn ani akɔ yɛn som ho. Sɛ y’anyɛ krado sɛ yɛbɛbɔ afɔdeɛ biara ama Nyankopɔn ani agye yɛn ho ɛna yɛrebɔ saa afɔdeɛ yi nyinaa no, na yɛredi Ne mmra so. Wei ne adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛyɛ, sɛ obi gye Islam di a. Ɛwɔ sɛ wei ɛwɔ ogyidini biara akoma mu. Ɛwɔ sɛ wei ɛwɔ obi a w’agye Imam no adi na w’abɛyɛ Ahmadiyyani. Nsɛm foforɔ mu no, ɛwɔ sɛ Ahmadiyyani kyerɛ suban soronko a ɛkyerɛ nsakraeɛ wɔ ne gyidie mu. Ɛwɔ sɛ nnipa biara nya saa atenka yi wɔ ne mu.
Ɛno nti Bɔhyɛ Mɛsia (ANN) no aka sɛ, agyidifoɔ ne wɔn a wɔn suban di adanseɛ wɔ wɔn gyidie mu. Wɔn akoma da wɔn gyidie adi. Na wɔyɛ deɛ ɛbɛma Nyankopɔn ani bɛgye dabiara na wɔyɛ wͻn asɛdeɛ a ɛho hia wɔn sene biribiara. Na wɔfa Nyamesuro kwan so, ahotee ɛnam Nyame nti. Nyankopɔn dɔ no bɛwura wɔn mu na sunsum bɔne biara a ɛba wɔn akwan mu a ɛbɛha wɔn no sɛ ɛyɛ suban a ɛtɔ kyema anaa sintɔ anaa nkukuo no wɔtwe wɔn ho firi saa neɛma no ho. Enti wei ne gyinabrɛ a ɛwɔ sɛ yɛhwehwɛ. Na sɛ yɛnya saa ginabrɛ yi a ɛno na yɛbɛtumi afrɛ yɛn ho sɛ yɛne wɔn a w’agye adie. Saa nkyerɛkyerɛ yi a Bɔhyɛ Mɛsia (ANN) ama no, ɛwɔ sɛ yɛfa Nyamesuro kwan so, ahoteeɛ. Wei ne kwan a yɛbɛfa so ayɛ Nyame asɛdeɛ ne N’bɔdeɛ na yɛde y’ano ne yɛn honamdua nyinaa ayɛ Nyame asɛdeɛ.
Sɛ wobɔ w’ano ne wo honamdua ho ban firi bɔne ho a, ɛwɔ sɛ w’adwene nso yɛ kann firi bɔne ho. Sɛ woyɛ wei a ɛnneɛ wo som, wo asɔreyɔ, w’adwene nyinaa bɛkɔ Nyame so na afei w’adi nkonim wɔ w’asɔreyɔ mu. Sɛ w’adwene wɔ awiase ne ne mu afɛfɛdeɛ so a, wonntumi mfa w’adwene nkɔ Nyame so wɔ wo mpaebɔ mu. Saa nnipa no bɛyɔ asɔre nanso na n’adwene wɔ baabi. Bɔhyɛ Mɛsia (ANN) no aka sɛ, wɔn a Nyankopɔn dɔ wɔ wɔn mu no yɛ agyidifoɔ papa no. Ɔkɔmhyɛni Kronkron Muhammad (NNN) akyerɛ wei sɛ, ɛyɛ esu baako a ɛwɔ ogyidini ho ɛne sɛ, afiri asɔre baako kɔsi baako so no, n’akoma kɔso di asɔredan no akyi. Saa nnipa no twɛn asɔre a ɛtwa toɔ no kɔsi sɛ foforɔ no bɛba sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛkɔ akɔ yɔ asɔre. Afei nso, awiase yi mu asɛdeɛ nso hia ma nnipa, ɛna Bɔhyɛ Mɛsia (ANN) no ama y’ate aseɛ na w’asan aka akyerɛ yɛn sɛ, nnipa a ɔnyɛ n’asɛdeɛ a ɛhyɛ ne nsa no ɔbɛbu ho akonta.
Ɛmfa ho ne adwuma korɔ a ɛyɔ sɛ ɛyɛ adwuma pa anaasɛ paadie anaasɛ biibiara,adeɛ biara a ɛyɛ biara.Adeɛ baako pɛ a ɛyɛ ne sɛ ɛwɔ mu sɛ wɔre adwuma wei nyinaa,ɛwɔ sɛ abrɛ biara no ɛwɔ sɛ ɔkaekae Nyame na sɛwɔ bɛ kaekae Nyame a saa nipa no bɛnya atenka na wahunu sɛ wayɛ ewiase nwuma no nyinaa na w’ayɛ anaa w’adi Onyankopɔn mmra no so na saa nipa no bɛyere ne ho sɛ wɔbɛyɔ n’adwuma no pɛpɛɛpɛyɔ mu. Na saa nipa wei bɛyere ne ho sɛ wɔnnyɔ ade bɔne biara anaasɛ adeɛ biara a ɛtia ɛmmra biara.Na saa nipa wei nwumadie a wɔdi no asaase so no nso ɛbɛyɛ honhom dwuma no fa nwumadie a wɔdi no wɔ ɛsom no mu ɛfiri sɛ saa nipa wei abrɛ biara ɛwɔ ne tiri mu sɛ wɔ bɛ nya Onyankopɔn nkyɛn anigyeɛ na wɔbɛ kae ne din abrɛ biara.
Na ɛnso ɛyɛ nokware sɛ wɔnom mfatodeɛ no ma yɛn awerɛnhyɛmu sɛ wɔnom anamon mu ne bɛ wo di wɔnom mfatodeɛ no akyi na sɛ wo yɛ wo wiase nnoɔma nyinaa na sɛ wode hyɛ wo tirimu sɛ wo pɛ sɛ wo nya Onyankopɔn nkoara nkyɛn anigyeɛ a Onyankopɔn nso de wo bɛka wɔnom a wɔnte ne kwan a ɛkɔ N’anigyeɛ ho no.
Bɔhyɛ Mɛsia(ANN) no kaa sɛ,sɛ wopɛ sɛ woduru mpɛmpɛnsoɔ a ɛkron wɔ gyidie mu a,ɛneɛ ɛwɔ sɛ woyere wo ho sɛ wobɛduru mpɛmpɛnsoɔ a ɛkron wɔsuban pa mu.Na deɛ ɛbɛ ma w’ahunu na sɛ wo bɛbu wo ho akonta sɛ w’aduru mpɛmpɛnsoɔ a ɛkron wɔ suban pa mu no kyɛnsɛ w’ahunu sɛ w’ayɛ wasɛdeɛ biara a ɛwɔ sɛ woyɛ de ma wo yɔnko nipa.Ɛnti sɛ wo bɛyɔ asɔre,nna ɛwɔ wo ankasa wo nteaseɛ mu a w’ayɛ w’asodie a ɛsɛ sɛ woyɛ ma awurade no ɛnso sɛ ɛbɛ ma yɛn abɛn Onyankopɔn.Ɛho hia nso ma ɔgyidini sɛ wɔ bɛyɔ n’asodie a ɛwɔ sɛ wɔyɔ no wɔ mantɛmu bea a wɔte.
Na Bɔhyɛ Mɛsia (ANN) no kaa sɛ yɛmmɔ yɛ ho ban ɛmfiri akwadworɔ ho ɛfiri sɛ wei nso twe yɛn ɛfiri Onyankopɔn nkyɛn.Mprem pii no wobusa obi a ɛyɛ den sɛ wɔbɛ yɔ mprenum asɔre no a, na me busa saa nkorɔfoɔ no mu bebiree asɛm a wɔka ne sɛ na akwadworɔ aka me na m’anhwɛ me ho so yie.Na saa akwadworɔ wei nso ɛmma onnya Onyankopɔn dɔ.Ne hwɛ a wɔnhwɛ wɔn ho so yie mpoeɛ, nkakera ɛtwe yɛfiri ɛkɔ no hwaafiri gyidie na afei ɛmma onipa no hwere ɛsuro a ɛwɔ atemu da no ne ɛsuro a ɛwɔ da a wɔbɛ bu akonta no na wɔde ne ho bɛba Onyakopɔn anim.
Wei sei nti na Onyankopɔn aka no wɔ gyidie wɔ ɛda asɔre dan mu ma,na wɔtaa ba asɔre. Ɛno nti na wakyerɛ yɛn sɛ yɛ bɛnya nnwuma a yɛ yɔɔ no wɔ saa ewiase wei ho akatua wɔ atɛmuda.Saa Nyamesom adwuma a yɛ yɔ no wɔ ahoteɛ mu sɛ yɛ bɛnya Onyakopɔn anigyeɛ no,na yɛ bɛnya gyidie wɔ Onyankopɔn mu wɔ ewiase wei na w’akae yɛn aka agyidifoɔ no ho no yɛ bɛnya mfasoɔ no wɔ asaase wei akyi wɔ abrɛ a wɔbɛma saa nipa ayɛ ɔsoro aheman mu odiadifoɔ .Na wɔ san ɛka sɛ wɔnom a wɔba asɔredan mu abrɛ biara bɛyɛ mprɛnum asɔre no san bɔ afɔdeɛ.wɔnom sɛei wɔn agyapadeɛ wɔ Nyame kwan so sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wanya ne nkyɛn anigyeɛ.
Wɔ Onyakopɔn adom mu no,Ahmadiyya kuo no wɔ akukuduro a wɔ bɛ bɔ afɔdeɛ wɔ Onyakopɔn nti.na ɛkuo bi wɔ hɔ a wɔbɔ afɔdeɛ nwanwasoɔ bi wɔ abrɛ a wɔresi saa asɔredan yi, ɛnkurofoɔ bi w;aseɛ America sika bɛyɛ mpempem.sɛ ɛba afɔrebɔ wɔ asɔredan sie mu a mpo wɔnom a wɔnyɛ Ahmadiyyafoɔ no bɔ afɔdeɛ akɛseɛ akɛseɛ nanso ahyɛnsodeɛ a ɛwɔ Ahmadiyyafoɔ no ho ne sɛ ɛno akyi no wɔnom kɔso bɔ afɔreɛ chanda tua ne deɛ ɛkeka ho saa ara na wɔde wɔn ho hyɛ adwumadie biara a ɛbɛ ba mu.wei sei nti na wɔnom afɔrebɔ no duru mpɛmpɛnsoɔ a ɛwɔ soro wɔ mfasodeɛ mu na ɛnkanka wɔ saa abrɛ yi ewiase apɛdeɛ na ɛdɔɔso saa abrɛ yi teatea mu.Onyankopɔn nhyira a ɛnni awieyɛ ɛnka yɛn daa saa nipa no ne n’agyapadeɛ nyinaa nka nkurofoɔ a wɔbɔ afɔreɛ no daa. Na ɛnso me pɛ sɛ me kae mo sɛ ɛnyɛ adwuma baako na ɛbɛma wo anya teneneeyɔ anaasɛ Nyame suro anaasɛ ɛbɛma wo gyidie awie pɛyɔ. Nokware ɛma agyidifoɔ no ne agyidifoɔ mapa no, ɛyɛ nhyɛ ma no sɛ wɔbɛyɛ Onyankopɔn asɛdeɛ ne N’abɔdeɛ nso asɛdeɛ.
Wɔ kur’aan no fa baabi no wakyerɛ ɛnsɛnkyerɛne bebiree a ɛwɔ agyidifoɔ no ho ɛmu kakeraa bi na mɛka ɛfirisɛ sɛ, sɛ yɛde wei ɛyɔ adwuma a yɛbɛkumi aka sɛ yɛka nkurofoɔ a w’abɔ wɔn ho na yɛ de yɛn aka wɔnom a wɔyɛ asɛredan asɛdeɛ no ho.
Allah ɔtumfoɔ no ka sɛ.Wɔnom a wɔyɛ agyidifoɔ no na wɔdɔ Allah paa.bɔhyɛ mɛssiah (as) no ka sɛ ɔdɔ ɛwɔ soro paa ne ɛsom, ne saa nti na asɛmfua ‘’Mohabbat’́’anaasɛ ɔdɔ ɛkɔ ma Onyankopɔn ɛnkoara. Na ɔsan ɛka sɛ, ɛsom yɛ kyɛfa mmienu .ɛfa baako ne sɛ yɛ bɛ suro Nyame sɛ deɛ ɛwɔ sɛ yɛ suro no.ɛne sɛ suro paa ɛdimu de ma Onyankopɔn no ɛde nipa kɔ ahoteɛ mu na nekraa nane na ɛtene kɔ Onyankopɔn hɔ na ahobraseɛ paa ɛdimu ma Onyankopɔn no tu mpon.Ɛnti wei ne ɛfa baako a ɛfa suro ho a ɛma nipa no akoma nane na nipa no butu Onyankopɔn anim na ɔyere ne ho sɛ wɔ bɛyɔ asodie a ɛwɔ Nyame som mu na wɛyere ne ho sɛ wɔ bɛyɛ akoa pa ama Onyankopɔn..
Na Bɔhyɛ Mɛsia (ANN) no san ka sɛ ɛfa baako nso a ɛka ho ne sɛ,yɛn dɔ Onyankopɔn na yɛn hunu mfasodeɛ a ɛwɔ Onyankopɔn dɔ ho.wei sei nti na wɔkasɛ agyidifoɔ no ne wɔnom a wɔdɔ Onyankopɔn paa sɛdeɛ bɛyɔ na yɛ bɛhunu ɔdɔ a ɛwɔ ewiase no sɛ ɛyɛ mmrɛ tiawa bi,na obi paa mu ka sɛ Onyankopɔn nkoa na ɔdɔ no.Wei sei ne asodie mmienu a Onyankopɔn busa firi nipa hɔ ma ne ho. Sɛdeɛ ɛbɛyɔ na y’ayɔ saa asodie mmienu wei a nipa sɛ sɛ wɔyɛ ma Awurade to ne som mu,ɛwɔ mu ɛsom biara wɔ ne asodie.Na islam ɛde ɛnoɔma ahodoɔ mmienu asi ho ma ɛsom. Ɛsuro ne ɔdɔ yɛ adeɛ mmienu a yɛnim sɛ yɛntumi nnya ɛmmɔmu, ɛbɛyɛ den na obi a osuro obi asan adɔ saa nipa na ankasa, nanso Onyankopɔn ho suro ne ho dɔ yɛ adeɛ mmienu a ɛnsonsonoyɛ da mu, na ɛkwan a onipa tumpɔn nso wɔ ɔdɔ a wɔwɔ de ma moho moho.na saa ara nso na ɔdɔ a wɔwɔ de ma Onyankopɔn no tu mpɔn ɛna ɛsuro de ma wo no nso tu mpɔn na ɛsuro no twe ne firi bɔne ho a ɛma no kyiri saa ɛnoɔma no ma ɛde no kɔ bea a ɛwɔ akyiri paa.
ɛnti wei ne gyinabrɛ a gyidini mapa ɛnya.
Bɔhyɛ Mɛsia (ANN) no kɔ so kyerɛ saa ɔdɔ wei na ɔkaa sɛ,sɛ wo pɛ sɛ wonya ɔdɔ nso deɛ a ɛneɛ bɔ ɛmpaeɛ na sɛ wopɛ sɛ wonya ɔdɔ nso deɛ a tu amantuo kronkron no (hajj) na wei nso yɛ ade foforɔ a ɛwa yie,ɛnti wei ne gyinabrɛ a ɔgyidini ɛnya.sɛdeɛ ɛbɛyɛ na Nyame suro no bɛma yɛ anya ne dɔ sɛ onipa duru saa mpɛmpɛnsoɔ yi a na wɔtumi som Nyame yie paa.obi yɛbɛtumi aka wɔyɛ asɔredan no asɛdeɛ.na wei nso ne gyinabrɛ a Bͻhyɛ Mɛsia (ANN) ɛhwehwɛ ɛfiri obiara a wɔgye ne to mu ho,ɛnti y’asi asɔredan yi ɛwɔ sɛ yɛ hunu no wɔ yɛ ho sɛ mpɛmpɛnsoɔ bɛn na yɛyɔ ɛsom no ho asɛdeɛ.na sɛɛ nso na yɛ yɔ hyɛ Onyankopɔn dɔ ne ho ma na wɔ sɛ yɛ san hwɛ hunu no mpɛmpɛnsoɔ bɛn na yɛ asodie a yɛwɔ de wɔ afoforɔ so ɛfiri sɛ yɛntumi nsom Nyame wɔ abrɛ a yɛnni taqwa tenenee na yɛnnya wei kyɛn sɛ y’adi Onyankopɔn mmra no so na ya san nso ahyɛ ne ma.
Onyankopɔn ama yɛn mmra bebiree a ɛbɛbɔ yɛ ho ban wɔ kur’aan kronkron no mu na ɛyɛ nhyɛ ma ogyidini sɛ wɔ bɛ hyɛ ne ma ɛno nko ara na wɔbɛfrɛ yɛn wɔnom a w’abɔ wɔn ho ban.ansaana mɛka ɛnsɛm kakera a ɛfa wei ho no ma me ma no nna adi pefee wɔ kyɛfa a mekenkan yɛ no mu,ɛhɔ w’atwerɛ sɛ enti weinom saa na wɔse sɛ wɔbɛkan wɔn aka aɔnom a wɛanya kwankyerɛ no ho(9:18). Wei ɛnkyerɛ sɛ sɛ wɔnom yɛ wei nom a ɛneɛ wɔ bɛ kan wɔn aka wɔnom a wɔanya kwankyerɛ no ho. Wei ɛnyɛ asekyerɛ sɛ, sɛ wɔnom bɛyɛ wei wɔ adwene pa mu a ɛneɛ wɔnom bɛka nkurofoɔ a wanya kwankyerɛ no hone deɛ ɛke ka ho.wei ɛnte saa wɔnom a wɔnim Arabic no nim sɛ,sɛ asɛmfua asaa(ebia)de ma Nyankopɔn a ɛkyerɛ sɛ wɔnom a watimtim wɔ wɔn gyidie mu wɔtua zakat ne afɔdeɛ ahodoɔ a aka sɛ wɔde bɛnya Onyankopɔn anigyeɛ,wɔnom nsuro obiara kyensɛ Onyankopɔn.wei nom ne nkurɔfoɔ a Onyankopɔn anim no wɔannya kwankyerɛ no na saa nipa no asɔrekɔ na wɔyɛ asɔre na wɔdi Onyankopɔn mmra no nyinaa akyi wɔnom na wɔn gyidie ne taqwa bɛkɔ so atumpɔn.
Wɔnom a wɔtiri yɛ paa ne wɔnom a wɔka yɛn ho a Onyankopɔn akae wɔnom a wɔanya kwankyerɛ no ho, na wɔnom ɛkɔ so na wɔnom ɛbeɛn Onyankopɔn.Mo mame nka adeɛ baako anaasɛ mmienu bi a Onyankopɔn ayɛ no asodieama yɛn. Onyankopɔn ka sɛ, mo ne nnipa a modi mu a wɔayi mo asi hɔ ama adasamma yiedie mo na mo kyerɛkyerɛ deɛ ɛyɛ papa na mo bra bɔne na mogye Allah die.(3 :111).
Wɔ saa kyɛfa yi mu no Onyankopɔn kyerɛ ahyɛnsodeɛ a ɛwɔ muslimfoɔ nokwafoɔ no ho ɛne sɛ wɔnom kyerɛkyerɛ deɛ ɛyɛ papa na wɔ bra bɔne yɛntumi nnyɛ saa adwuma wei kyensɛ deɛ nipa no ka ne deɛ ɔreyɔ pɛpɛɛpɛ sɛ deɛ yɛre yɛ ne deɛ yɛreka no bɔ abira a yɛn ankasa yɛn nkurofoɔ no ɛntie yɛn na wɔnom nnya nsuswansoɔ biara nso wɔ afoforɔ so. Ɛnti y’asi saa asɔredan yi sɛ deɛ ma ka no akwan bibiree ama yɛn a yɛn kyerɛkyerɛ no bɛkɔ afoforɔ hɔ na nso sɛ yɛ suban no ne yɛn kasa ankɔ a,sɛ deɛ Onyankopɔn aka no,ɛneɛ na yɛnyɛ nkurofoɔ a wɔdi mu.
Na yɛ gyidie a yɛwɔ ɛwɔ Nyame mu no nyɛ nokware na mfasoɔ biara ma yɛn ɛsɔyɔ so na yɛn afɔde bɔ no nso nnya nyɛntomu na deɛ yɛ ka nyina no ɛnnyɛ nokware sɛ yɛ wɔ Nyame suro wɔ yɛn akoma mu. Ɛyɛ yɛn asɛ deɛ sɛ yɛbɛ siesie yɛho wɔ Onyankopɔn mera ho. Ɛnna baako nso ne sɛ : Monka deɛ ɛyɛ nkyerɛ nnipa (2:84). Ɛkwan a ɛdinkan a yɛbɛ daa no edie no ɛyɛ yɛn ankasa yɛ ho na ɛnkanka ne wɔnom a wɔwɔ dibrɛ no wɔn hwɛ wei yie. Ansaana yɛbɛkɔ abɔntsen akɔ ka akyerɛ afoforɔ no , ɛwɔ sɛ yɛ hwɛ y`asɔrdan mu mu nkurɔfoɔ a wɔyɛ atseneneefoɔ a wɔsom Nyankopɔn , na Onyankopɔn nti, na wɔhyɛ no ma deɛ Onyankopɔn hwe hwɛ firi wɔnom hɔ wɔ ɛsommu.
Ɛtɔ da a wɔka nsɛm kyerɛ me aɛfa wɔnom a wɔwɔ dibeɛ no ho, anaasɛ wɔnom nso a wɔnom ama wɔn ho so wɔ tenenee mu, na wɔkasa kyerɛ afoforoɔ a ɛma no yɛ wɔnya yie na ɛnam sso ma wɔnfiri Jama`at no mu. Saa nkurɔfoɔ wei, anka ɛwɔsɛ wɔboa ma asɔredan no hyɛma no wɔma afoforɔ mpo gyaei. Ɛnti sɛ yɛ bɛyɛ nipa papa a, deɛ ɛdinkan ne sɛ yɛbɛ sesa yɛ ho. Na sɛ abrɛ biara ɛsi wɔ abrɛ a yɛresi asɔrdan no, akwan afoforɔ yɛ faso de asɛm no kɔ akyir ɛbue na aha so wei sei ɛbɛ si, ɛnti sɛ nipa no behunu asordan noa anaasɛ efiri wɔn ankasa womamfofoɔ mu, ɛwɔ sɛ yɛ kɔ so tumpɔn na yɛ yere yɛ ho ma afoforɔ hunu sɛ abrɛ biara Ahmadiyyafoɔ y`atu yɛho ama a yɛde yɛ papa ma afoforɔ.
Wei sei ne atenka a ɛwɔ sɛ yɛnya na yɛ da no edie a ɛfa Ahmadiyyafoɔ ho. Wei ne Islam nkyerɛkyerɛ noa anka ɛsɛsɛ dwene yɛ ankasa yɛ yiedie ho no, yɛ dinkan dwene afoforɔ no yiedie. Na ɛnyɛ sɛ yɛ bɛ dwene ho na yɛ suban nso kyerɛ na afei a y`asi asɔredan no nkurofoɔ bɛhunu wei. Allah Otumfoɔ no ebue akwan afoforɔ ama yɛn a yɛbɛtumi afa so atrɛ Islam Ahmadiyya nkyerɛkyerɛ mu. Aberɛ bi wɔ hɔ a ɛkwan wei bue a ɛnyɛ obiara ahoɔden na mobɛ hunu no wɔ ahanom sɛ saa pɛpɛɛpɛ na ɛbɛsi. Ɛnti ɛnam mo suban ne mokasa so na ano bɛbɔ Islam ne nkyerɛkyerɛ.
Ɛnti sɛ m`adinkan aka no, sɛdeɛ mosi bɛhwɛ moho moho wɔ ɔdɔ mu ne sɛ mobɛnya Onyankopɔn anigyeɛ. Ɛwɔ sɛ obiara etu mpɔn ɛwɔ wei ho, na afei sɛdeɛ wei ho hia na y`atumi aka yɛn nkyerɛkyerɛ na y`ahyɛ yɛn kuo no den no nso hia na ɛho hia sɛ yɛ bɛ nya Onyankopɔn nkyɛn dɔ. Ɛbetumi aba sɛ yɛresi asɔrdan yi ɛkuono bɛyɛ den nay`adi Onyankopɔn mera so na ɛbɛma y`ahyɛ yɛn asɔrdan no mu ma na yɛsrɛ sɛ yɛ nyinaa y`akoma ɛmmata asɔrdan no ho daa te sɛ ɛkwan Ɔkɔnhyɛnyi Krɔnkrɔn (NNN) no pɛɛ ma ɛgyidifoɔ mapa no. Yɛsrɛ sɛ asɔrdan wei nyɛ beaɛ a ɛbɛ twe Onyankopɔn adom na na obiara ɔbɛba ha biara no nya ne kyɛfa na ɛkwan a Ahmadiyya nkyerɛkyerɛ bɛko so no mbue ma yɛn wɔ aberɛ a y`asi asɔrdan yi.
Afei mo ma menka nsɛm kakra a ɛfa asɔrdan yi ho. Menim sɛ kuromafoɔ no wɔnom ɛnfa ho saa na mmom wɔnom a wɔwɔ mbea a aka no a wɔre hwɛ no bɛpɛ sɛ wɔ bɛtie.
Wɔ afe 1997 mu na Hazrat Khalifatul Masih (IV)rh de too dwa sɛ wɔpɛ sɛ wɔsi asɔredan na ɔsan too ne dzin Baitul Rahman. W`asi asi asaase bɛyɛ 3.7 acres so na ne tɛtrɛtɛ no bɛyɛ 33,419. Ɛtoaso mienu na “dome” a ne tenten yɛ 76ft. Saa brɛ yi ɛmaa no ne ɛmɛɛma no dabrɛ no w`aka abo mu a ne kɛseɛ 6800 na nipa 1132 na ɛbɛtumi ayɛ asɔre wɔ hɔ, na baabi a yɛde lɔre esisi no fa bɛyɛ sɛ 140 , na baabi foforɔ nso wɔ ha a ɛfa nipa bɛyɛ 1050 ɛnti woka no nyinaa bɔmu a ɛyɛ 2000, library, Tabligh office,ɛgyaare,amu korabea, adan anan a wɔsua adeɛ wɔ hɔ,ahɔhogye bea, asɔfoɔ tenabea na wɔsiesie dan no fɛfɛfɛ. na asɔredan no ho nyinaa ka no yɛ ɔpepe Canada $8.5.
Onyankopɔn nhyira saa asɔredan wei nyɛ nhyira ma mo aberɛ biara. Awieɛ no mepɛ sɛ me kae biibi kakeraa bi firi Bɔhyɛ Mɛsia (ANN) no atwerɛsɛ, mu. Ɔkaa sɛ, “Sɛ yɛka sɛ asɔredan ɛyɛ fɛ paa a na ɛnkyerɛ sɛdeɛ ɛsiteɛ na mmom sɛdeɛ wɔnom a wɔyɔ asɔre wɔ mu no siteɛ wɔ aberɛ wɔyɔ asɔre wɔ akoma pa mu. Sɛ saa nkurɔfoɔ no nni hɔ a asɔredan no wɔ hɔ kwa. Na Ɔkɔmhyɛni Kronkron (NNN) no sua na abɛ mpanpan na abɔ so na sɛ nsuo tɔ a ɛba hɔ. Ɛnso asɔredan no nsesaeɛ no yɛ wɔnom a wɔsom wɔ mu. Ɔkɔmhyɛni Kronkron (NNN) no aberɛ so nkurɔfoɔ bi sii asɔredan a Onyankopɔn hyɛ wɔn sɛ wɔn bubu no. Na asɔredan no de Masjid Zarar. Wɔbubuu saa asɔredan no, ne sɛ ɛnti ne sɛ ɛwɔ sɛ yɛsi no wɔ Taqwa ne tenenee nti.
Ɛnti wei na ɛwɔ sɛ Ahmadiyyani biara de hyɛ ne tiri mu. Bɔhyɛ Mɛsia no kɔ ka sɛ, “ɛwɔ sɛ ɛkuo no nya ɔno anka n’asɔredan a wɔbɛnya Imam a wɔfri saa ɛkuo yi ankasa mu a ɛwɔ sɛ wɔtu wɔnfo na wɔbɔ nkurɔfoɔ no ho ban na wɔnom nyinaa nka mom na wɔnyɔ asɔre. Nhyira bebiree wɔ ɛkuo no mu ne nkabɔm na basabasayɔ ba sɛ yɛnni nkabom a. Na wei ne aberɛ a nkabom hia sɛ ɛbɛtu mpɔn wɔ yɛn mu na ntawantawa biara yɛnyi mfiri hɔ na amfa mpaepae mu amma.
Onyankopɔn mmoa yɛn na yɛntumi nni wei so. Amen!
Translated by: 1. Mr. Abdul Hakeem Oduro Sahib
2. Mr. Ali Majeed Sahib
3. Mr. Abdul Hameed Ismael Sahib